E Bukọtala Ụfọdụ Alaka Ụlọ Ọrụ Ndịàmà Jehova Ọnụ
Ihe Gbasara Betel Anyị
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Armenian (West) Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Fante Finnish French Garifuna Georgian German Greek Haitian Creole Hausa Hungarian Igbo Indonesian Italian Japanese Kannada Kinyarwanda Korean Lithuanian Malagasy Malay Malayalam Nahuatl (Central) Norwegian Persian Polish Portuguese Portuguese (European) Rarotongan Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Tahitian Tarascan Totonac Tsonga Turkish Tzeltal Tzotzil Ukrainian Umbundu Urdu Valencian Xhosa Yoruba Zulu
Malite mgbe e bidoro ibukọta alaka ụlọ ọrụ dị iche iche ruo n’ọnwa Septemba afọ 2012, e mechiela ihe karịrị alaka ụlọ ọrụ iri abụọ, gwazie ụfọdụ ndị na-eje ozi ebe ndị ahụ ka ha gafee n’alaka ụlọ ọrụ ndị ka buo ibu.
Ma, anyị enweela alaka ụlọ ọrụ n’obodo Sebia na Masedonia. E nwere ihe abụọ mere e ji na-ebukọta ụfọdụ alaka ụlọ ọrụ ọnụ.
1. Nkà na ụzụ emeela ka ọrụ dị mfe
Ígwè ọrụ ndị bụ́ ọkpọka a na-eji ezipụ ozi nakwa ndị nke e ji ebi akwụkwọ emeela ka ọrụ ọtụtụ ndị na-arụbu n’ụfọdụ alaka ụlọ ọrụ buru ibu bụrụzie ọrụ mmadụ ole na ole ga-arụli. O meela ka ndị na-arụ n’ebe ndị ahụ belata, ụfọdụ ndị na-arụbu n’obere alaka ụlọ ọrụ enwezie ebe ha ga-ebi ma ezite ha ná ndị nke ahụ buru ibu.
Ihe a emeekwala ka e nwekwuo ụmụnna ndị nọ n’alaka ụlọ ọrụ ndị buru ibu na-elekọta ọrụ ikwusa ozi ọma a na-arụ n’obodo ndị ha na-elekọta. Dị ka ihe atụ, e mechiela alaka ụlọ ọrụ anyị ndị dị na Kọsta Rika, El Salvadọ, Gụatemala, Họnduras, Nikaragụa na Panama. Ọ bụzi alaka ụlọ ọrụ anyị dị na Meksiko na-ahụ maka ọrụ ikwusa ozi ọma a na-arụ n’obodo ndị ahụ.
A gwaziri mmadụ iri anọ so ná ndị na-arụbu n’alaka ụlọ ọrụ ndị ahụ e mechiri emechi ka ha gaa rụwa n’alaka ụlọ ọrụ Meksiko. Ma, ihe dị ka mmadụ iri itoolu na ise n’ime ndị na-arụbu n’alaka ụlọ ọrụ ndị ahụ e mechiri emechi nọ n’obodo ha na-eje ozi oge niile.
Ndị nsụgharị nọbu n’alaka ụlọ ọrụ ndị ahụ e mechiri emechi ka nọkwa n’obodo ndị ahụ na-arụ ọrụ ha. Ma, ọ bụ alaka ụlọ ọrụ anyị dị na Meksiko na-elekọta ọrụ ha. Dị ka ihe atụ, ihe dị ka Ndịàmà Jehova iri abụọ na Panama na-asụgharị akwụkwọ anyị ndị e ji amụ Baịbụl n’asụsụ ndị a na-asụ n’obodo ahụ. Na Gụatemala, e nwere ndị nsụgharị iri na isii na-asụgharị akwụkwọ anyị ndị e ji amụ Baịbụl n’asụsụ anọ a na-asụ n’obodo ahụ. Tupu e mechie alaka ụlọ ọrụ isii ahụ, e nwere narị mmadụ atọ bụ́ ndị ozi Betel n’obodo ndị ahụ. Ma ugbu a e mechirila ha, ọ bụzi ihe dị ka mmadụ iri asaa na ise na-eje ozi bụ ndị Betel n’obodo ndị ahụ.
2. E nwekwuola ndị ozi oge niile na-ekwusa ozi ọma
N’ihi otú a e si bukọta ụfọdụ alaka ụlọ ọrụ, ọtụtụ Ndịàmà Jehova na-ejebu ozi n’alaka ụlọ ọrụ ndị ahụ e mechiri emechi e nwekwuola ohere ha ga-eji na-ekwusa ozi ọma.
Mgbe e mere ụdị ihe a n’Afrịka, e nwere otu Onyeàmà Jehova na-ejebu ozi na Betel e zipụrụ ka ọ gaa kwusawa ozi ọma. O kwuru na n’ime ọnwa ole na ole e zipụchara ya, na o sitụụrụ ya ike ime ka ebe ahụ e zigara ya mara ya ahụ́. Ma, o kwukwara na ozi ya na-aga kwa ụbọchị na-eme ya obi ụtọ, nakwa na Jehova na-agọzi ozi ya karịa otú ọ tụrụ anya ya. Ọ sị na ya na-akụziri mmadụ iri abụọ Baịbụl ugbu a, nakwa na ụfọdụ n’ime ha amalitela ịbịa ọmụmụ ihe.